बौने कुकुरहरूका प्रजातिहरू के हुन्? भित्र आउनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्! | कुकुरहरु को विश्व
बौने कुकुरहरूका प्रजातिहरू के हुन्?
लुर्ड्स सरमिआन्टो | | कुकुर जात
बौना कुकुरहरु धेरै क्षमताहरु को लागी बाहिर खडा, मर्मत धेरै जटिल छैन र घर भित्र राम्रो तरिकाले व्यवहार गर्न, तपाइँको अविभाज्य साथीहरू बन्न।
यस बीच बटार कुकुर जातका हामी केहि पत्ता लगाउन सक्छौं जुन अझ लोकप्रिय छ अरूहरू भन्दा र यस लेखमा हामी तपाईंलाई यसको सबै विशेषताहरूको साथ देखाउनेछौं, ताकि तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्नेलाई छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
1 बौना कुकुरहरूले उस्तै शिक्षा लिनु पर्छ
2 बौना कुकुर जात
2.1 यार्कशायर टेरियर खेलौना
2.3 खेलौना पोडल
2.4 बिचोन माल्टिज मिनी
बौना कुकुरहरूले उस्तै शिक्षा लिनु पर्छ
होइन किनकि हामी बौने कुकुरको अगाडि छौं हामीले त्यसलाई हुर्काउने बानीहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यो हुन सक्छ कि यी छ केहि ब्यवहार जुन कष्टकर छन्, एक ठूलो कुकुरले यो पाउनुपर्दछ त्यस्तै प्रकारले, तर निश्चय पनि हामीले सानालाई भन्दा अर्कालाई नराम्रो ठान्छौं।
त्यो कुनै पनि हिसाबले राम्रो छैन, किनकी यसको साइजको बाबजुद पनि, हामी जहिले पनि कुनै कुकुरको सही प्रशिक्षणको बारेमा सोच्नुपर्दछ, चाहे यो सानो छ वा ठूलो।
सामान्यतः, साना कुकुरहरु सबै भन्दा बढ्दो, हामीलाई परिस्थितिको अगाडि त्यो असन्तुष्टिमा हामीलाई सँधै देखाउँदै। तर धेरै सानो भएकोले, यसले हामीलाई डराउँदैन र निश्चित कोमलतालाई पनि प्रेरित गर्न सक्छ, जुन केहि सही छैन।
यदि ऊ हुर्कंदा हामीले उसलाई हप्काएनौं भने, कुकुरले सोच्न सक्छ कि यो व्यवहार राम्रो हो र निश्चित रूपमा हरेक पटक उसलाई पटक्कै दोहोर्याइन्छ जुन उसले केही पनि मनपर्दैन। एउटा सानो कुकुरको कुनै पनि व्यवहारले हामीलाई अनुग्रह दिन्छ भनेर यसको मतलब यो होइन कि हामीले उनीहरूलाई दृढ रूपमा शिक्षा दिनु हुँदैन।
बौना कुकुर जात
के तपाईलाई सबै बौने कुकुरहरु थाहा छ? त्यहाँ एउटा मिनी कुकुर जातको ठूलो संख्या तपाईसँग हुन, बढाउन, शिक्षा प्रदान गर्न र कुनै रोकावट बिना पम्पर गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सबै धेरै राम्रा छन् र खुशी हुन धेरै लिदैनन्। यी उत्तम बौने कुकुर जातका हुन्।
यार्कशायर टेरियर खेलौना
यो ग्रह वरपरका मानिसहरुद्वारा सबै भन्दा धेरै छानिएका बौने कुकाहरु मध्ये एक कुकुरको यो नमूना हो c० सेन्टिमिटर लामो हुँदैन, जसको कान ठानेको छ, एउटा सानो टाउको र कूलमा लगभग kil किलोग्राम तौल लिन सक्छ।
सबै मास्टर मा मा एक विशेषताहरु यस प्रकारको कुकुर उहाँप्रति आफ्नो विश्वास र स्नेह होयद्यपि तिनीहरू प्राय: प्रायः प्रादेशिक पनि हुन्छन्, त्यस्तै कुराको लागि हामीले राम्रो शिक्षा लागू गर्नुपर्दछ ताकि यो हाम्रो बिरूद्धमा खेल्दैन।
लगभग सबै साना नस्लहरू जस्ता, यी कुकुरहरू बार्करहरू हुन्छन् र सबै चीज चबाउन थाल्छन् तिनीहरूले आफ्नो मार्गमा के पाउँछन्, त्यसैले तिनीहरू सही तरिकाले शिक्षित हुनुपर्दछ र यो समस्या हुनेछैन।
उनीहरूको प्रशिक्षण दिनु पर्ने छ किनकी तिनीहरू पपीहरू हुन् र तपाईंले तिनीहरूलाई शिक्षाका केही खास गुणहरू सिकाउन कहिल्यै रोक्नुहुन्न। जब उनीहरू पर्याप्त उमेर पुगे पनि।
यस प्रजातिको समस्याहरू मध्ये विशेष गरी यसको स्वास्थ्यमा, तथ्य यो हो कि उसले आफ्नो खोपडी वा दाँतको सही विकास गर्दैन, केहि चीज जसले सामान्य रूपमा समस्याहरू निम्त्याउँछ।
अर्को समस्या हुन सक्छ तपाईंको रगत चिनीमा अचानक बूँदाहरू, कि हाइपोग्लाइसीमिया हो, त्यसैले यदि हामीले यी लक्षणहरू पहिचान ग .्यौं भने हामीले उनीहरूलाई थोरै मह दिनुपर्दछ, यद्यपि यसो गर्नु अघि यो जहिले पनि पशुचिकित्सकलाई हेर्न सल्लाह दिइन्छ।
यो हुन सक्छ सानो कुकुरको प्रजाति मध्ये एक जुन सब भन्दा धेरै देखीएको छ उमेर को लागी र यो तथ्य हो कि यो पूर्ण प्राकृतिक उत्पतिको एक जात हो।
चिहुआहुआ3किलो वजन सम्म पुग्न सक्छयद्यपि प्राय जसो केसहरूमा यो पनि आउँदैन। यो यस कारणका लागि हो र यसको शारीरिक ज्ञानको लागि कि यो संसारको सब भन्दा सानो कुकुर मध्ये एक हो।
यसको कुल लम्बाई अधिकतम २० सेन्टिमिटरसम्म पुग्न सक्छ र यसको बनावट कम्प्याक्ट छ, एक धेरै सानो शरीर र धेरै बलियो खुट्टा संग। तिनीहरूको कानहरू सामान्यतया राम्रोसँग सिधा र लामो आकारको हुन्छन् र उनीहरूको टाउको एकदम गोल हुन्छ। तिनीहरूको बुद्धिमत्ता एक विशेषता हो जसको लागि उनीहरूलाई राम्ररी परिचित छ र उही जातका अरू नमूनाहरूसँग राम्ररी जानको लागि।
यदि तिनीहरूसँग अधिक सहमति गर्नुभयो भने तिनीहरू समस्यामा पर्न सक्छ। र यो उनीहरूको कठोरता र vivacious विशेषताहरू संग गर्नुपर्दछ, जुन तपाईंले बेवास्ता गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ। यो अविश्वसनीय छ कि त्यस्ता साना आयामहरूको कुकुरको २० वर्षसम्म बाँच्न सक्षम भएर त्यस्तो लामो आयु हुन्छ।
सबै कुकुरहरु जस्तै केहि असुविधा हुन सक्छ र चिहुआहुआसको हड्डीमा जटिलता हुन सक्छ, उसको सानो मुटुमा मोतियाबिन्दु र अन्य केही समस्याहरू जस्तै रोगहरू छन्।
त्यहाँ भिन्न प्रकारका पोडल्स छन्, धेरै भिन्न र विभिन्न प्रकारका आयामहरू छन् जुन तिनीहरूलाई फरक गर्दछ। यो यसको खेलौना प्रकार हो, तिनीहरू मध्ये सब भन्दा सानो, भएको कुनै वजन भन्दा kil किलो भन्दा बढी र आकार जुन २ 23 र २ c सेन्टिमिटरको बीचमा आदर्श हो।
यति सानो हुनु पनि, खेलौना poodles तपाईंको शरीरको आयाममा आनुपातिक देखाइन्छ। तिनीहरूसँग सामान्यत: गोलाकार र झर्ने कानहरू हुन्छन् जसले उनीहरूलाई धेरै राम्रा देखिन्छन्, जे होस् उनीहरूको कपालले उनीहरूलाई पूरै ढाक्न सक्छ।
तिनीहरूको लम्काएको टाउकोले उनीहरूलाई धेरै सममित बनाउँदछ र उनीहरूमा विभिन्न टोन र स्टाइलहरूको कोट हुन्छन् जसमध्ये कर्ल वा घुमाउरो कपाल भएका मानिसहरू अधिक सामान्य हुन्छन्, तर त्यहाँ कर्डुरॉय कपाल भएको पनि हुन्छन्। कालो, सेतो र खैरो र t्गका टोनहरू हुन् जसले यस ब्रीडको कोटलाई सब भन्दा बढी विशेषता दिन्छ।
यति सानो भए पनि, यी कुकुरहरूलाई धेरै गतिविधि चाहिन्छ र यसको एक कारण यो हुन सक्छ कि उनीहरूलाई शिकारको लागि पैदा गरिएको छ। आकारको यो अभावको सम्बन्धमा, जे भए पनि तिनीहरू धेरै बलियो छन्, त्यसोभए तिनीहरू बोरिनेछन् यदि उनीहरूले धेरै क्रियाकलापको आनन्द लिने छैनन्।
छन् आँखा कठिनाइ र तिनीहरूका हड्डीहरूको विकास र आनुवंशिकीमा केही समस्याहरू छन् जुन यो खेलौना पूडल नस्लमा एक नुकसानको रूपमा देखा पर्दछ।
बिचोन माल्टिज मिनी
एउटा जाति जुन संसारको सब भन्दा सानो बीचमा पनि छ यो सायद २ 25 सेन्टीमिटरको लम्बाईमा र kil किलो तौलमा पुग्छ। धेरै कपाल भएकोले हामी विश्वास गर्न सक्छौं कि तिनीहरू वास्तवमै भन्दा अलि बढी शक्तिशाली छन्, तर तिनीहरूसँग प्राय जसो दुबै पातलो र लम्बी शरीर हुन्छ।
यो शरीर बलियो छ र यसको टाउको सानो छ, गोल आँखा र लगभग कान संग तपाईं कति सानो देख्न सक्नुहुन्न र तिनीहरू कपाल भरिएका छन्।
रेशमी चिल्लो कोट भएकोले, जसले आफ्नो कपाल लामो राख्न रुचाउँछन् उनीहरूले प्राय: दैनिक हेरविचार गर्नुपर्दछ, त्यसैले कोही व्यक्तिले यसलाई छोटो काट्न रुचाउँछन्। उनीहरु खुसी छन् र तिनीहरू जहिले पनि रमाइलोको लागि केहि खोजिरहेका हुन्छन्, तर तीनिहरू पनि निश्चित सीमा तोक्न आवश्यक छ ताकि तिनीहरूले हामीलाई समस्या नपरोस्।
गर्मी र सूर्य जोखिम पक्कै तपाईंको शत्रु हो, त्यसैले हामीले तिनीहरूलाई ओभररेक्सपोजरबाट टाढा राख्नुपर्नेछ यो मौसम अवस्था मा। यी संसारमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको बौने कुकुरहरू हुन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » सामान्य कुकुरहरु » कुकुर जात » बौने कुकुरहरूका प्रजातिहरू के हुन्?
अकिता inu, एक धेरै विशेष कुकुर
घरेलु उपचारको साथ कुकुरमा मंगेज कसरी गर्ने